ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၅-၃-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၅-၃-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- လက်ပံတောင်း တောင်သူများ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို တရားစွဲ click
- သမ္မတကို တရားစွဲမှု ထူးခြားဖြစ်စဉ်အဖြစ် တရားရုံးက လက်ခံပြီ click
- လက်ပံတောင်းတောင် မီးလောင်ဗုံးကိစ္စ ဦးသိန်းစိန်အား အမှုဖွင့် (ဓာတ်ပုံသတင်း) click
- တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင် ခိုင်မြဲရန်လိုကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော click
- သထုံခရိုင် ဆက်ဆံရေးရုံးဖွင့်ပွဲ သွားသည့် ကေအန်ယူခေါင်းဆောင်များ အစိုးရနှင့် အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးမည် click
- ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်၏ ကချင်စစ်ဘေး ပထမအကြိမ် လှူဒါန်းမှု မှတ်တမ်းပုံများ (ဓာတ်ပုံသတင်း) click
- မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းထားသော်လည်း ပြောင်းရွှေ့ခံဒေသခံများ နေရပ်ပြန်ခွင့် မရသေး click
- ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ရခိုင်ရွာများ လုံခြုံရေးအတွက် ညကင်းစောင့်နေရ click
- တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် တိုင်းရင်းသားပါတီများသာ ၀င်ပြိုင်လို click
- New York Convention အဖွဲ့ဝင်ရန် လွှတ်တော် အတည်ပြု click
- ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများကြောင့် ဒေသခံများ အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံး click
- USAID အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မြန်မာနိုင်ငံ သွားရောက်မည် click
- အခွန်ငွေကျပ် ဘီလီယံ ၂,၃၀၀ ကျော် ရအောင် ကောက်မည် click
- လေးနှစ်အတွင်း ကျွန်းနှင့်သစ်မာ ၆၅ သိန်းကျော် စိုက်ပျိုးခဲ့ဟု ဝန်ကြီး ဆို click
- ၁၁ လ အတွင်း ပုဂ္ဂလိက ဆန်စက်သစ် ၂၉၀ ကျော် တိုးချဲ့ခဲ့ click
- ဟံသာဝတီ ကားပွဲစားတန်းကိစ္စ ပြေလည်မှုရရှိ click
- မော်တော်ကား တင်သွင်းခွင့် အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းချက် click
- ဆက်သွယ်ရေး အရာရှိတချို့ကို ပြန်လွှတ်ပေးသော်လည်း အမှုမရုပ်သေး click
- ကြက်ဆူစိုက်ခင်းအတွက် သိမ်းဆည်းလယ်မြေ ခရိုင်တာဝန်ရှိသူ သိန်းရာဂဏန်းအထက်ဖြင့် ငှားစား click
- သထုံမြို့နယ်၊ ကွင်းကလေးဒေသတွင် ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း တွင်ကျယ်နေ click
- ဖမ်းဆီးရမိသော လောင်းကစားခုံများကို မြ၀တီတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် မီးရှို့ဖျက်ဆီး click
- သောက်ရေခပ်စီမံကိန်း အသိမ်းခံမြေများကို ထုံးဘိုဒေသခံများ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်လို click
- ကျုံမကူးချောင်းအတွင်း ဓာတုအဆိပ်သင့် ပစ္စည်းများ ပျော်ဝင်နေ click
- အဆိပ်သင့် ကျုံမကူးချောင်း (ရုပ်သံ) click
- ရေပြတ်လပ်မှုကြုံနေရတဲ့ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် (ရုပ်သံ) click
- “ထိုင်းဘုရင်ဂူ အမှန်ဆိုတာကို တင်ပြပေးရုံ သက်သက်ပါပဲ” (အင်တာဗျူး) click
- ရခိုင်သမိုင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာပညာရှင်များ ရှင်းလင်းပွဲကို မတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည် click
- မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင် ဆယ်တန်း စာစစ်ဌာနများ လုံခြုံရေး တင်းကျပ်မည် click
- တိုင်းရင်းသားစာပေ သင်ကြားနိုင်ရန် ဒေသခံဆရာတို့ကို ခန့်အပ်သွားမည် click
- တွေ့ကြုံခဲ့ရသော ကျောင်းဆရာတဦး (သူ့အမြင်) click
- ကျောင်းသားဗဟိုပြု မြန်မာမှုနှင့် ဝေး (စာဖတ်ခန်း) click
- တိုက်စစ်မှူး ကျော်ကိုကို လက်ရွေးစင်အသင်း ၃ လပွဲပယ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရ click
- AFC ၂၀၁၄ ဖလား ခြေစစ်ပွဲအောင်ဖို့ ခက်ခဲသွားတဲ့ မြန်မာအသင်း click
- ဟွန်ဒူးရပ်စ်နိုင်ငံတွင် လူငယ်များ မူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းများကြောင့် အသေအပျောက်များ click
ဦးသိန်းစိန်အစိုး၇က ဆင်းကဒ်ကို နိုင်ငံတကာဈေးနှုန်း ထက် ၃ ဆ ဈေးလောက်နဲ.ေ၇ာင်းမယ်.အေ၇းက်ို နိုင်ငံတွင်း
ဆင်းကဒ် အေ၇ာင်း ၃ လလောက်ပိတ်ပြီး (ဒူးပေါ်လက်တင်) စဉ်းစားနေတာ ပြည်သူတွေအနိုင်ကျင်.
တာပါ ။ နိုင်ငံတကာ မှာ ဆင်းကဒ် နိုင်ငံတကာဈေးနှုန်း
၃၀၀၀ ကျပ် လောက်၇ှိတာပါ ၊ လာအို ၊ ကမ္ဘောဒီးယား ၊
သီ၇ိလင်္ကာ က ဆင်းကဒ် နိုင်ငံတကာဈေးနှုန်း၃၀၀၀ ကျပ်
နဲ.ပြည်သူတွေကိုေ၇ာင်းပေးနိုင်တဲ. သမတ ၊၀န်ကြီးချုပ် တို.ကို သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်
အနေနဲ. သွားပြီးဒူးထောက် ၊ဂါ၇၀ပြု ဆ၇ာ တင်ဖို. လိုနေပါပြီ ။